Yusuf Garaad: Maxkamadda Caddaaladda oo dhegeysatay Kenya
Waa sawir laga qaaday fadhigii maanta
Kenya waxay ku eedeysay Soomaaliya in ay qaadatay Istaraateejiyad ay isku-diidsiineyso Is-afgaradkii la saxiixatay Kenya. Mar waxay Soomaaliya ku doodday ayay tiri in aan Wasiirkaa saxiixay aanuu haysan Is-afgaradku aanuu u haysan oggolaasho. Taas waxaa beenisay ayay tiri in la helay warqad lagu siiyay oggolaasho. Mar kale Soomaaliya waxay ku doodday ayay tiri in Baarlamaanku uu waxba kama jiraan ka soo qaaday Is-Afrgaradka. Taas waxaan haynaa ayay tiri Kenya dooddii baarlamaanka ka dhacday oo dhan oo la qoray kelmad kasta oo maalintaas laga yiri Baarlamaanka. Kuma jirto doodda wax muujinaya in waxa ku qoran Is-Afgaradku ay yihiin khalad.
Sidaa darteed Kenya waxay qabtaa in Soomaaliya ay xushmeyso oo ay u hoggaansanaato waxa uu qorayo Is-Af-Garad ay la saxiixatay Kenya 2009.
Kenya waxay dooddeeda u sameysay hordhac qurux badan oo muujinaya sida ay Kenya ay u saacidday Dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed. Tusaale waxay Kenya u soo qaadatay soo dhoweynta qaxootiga, marti-gelinta shirkii lagu dhisay Dowladda Soomaaliya 2004, marti gelinta Xukuumadda iyo Baarlamaanka Soomaaliya ilaa ay aakhirkii u suurta gashay in ay si qeyb qeyb ah ugu guuraan Soomaaliya. Kenya waxaa kale oo ay sheegtay in ay wiilasheeda iyo gabdhaheeda ciidanka ay u dirtay Soomaaliya si ay uga qeyb qaataan nabadeynta dalka, howlgalkaas oo ay ciidan badani uga dhinteen.
Arrimahaas oo dhan ayaa muujinaya ayay yiraahdeen in aanay suurta-gal ka ahayn Kenya in ay bad Soomaliya leedahay ay ku xadgudubto.
Kenya waxaa wafdigeeda hoggaaminaya Garyaqaanka Guud, Githu Muigai.Madam Rose Makena Muchiri, oo ah Danjiraha Kenya u fadhiya magaalada Hague. Amos Wako oo xubin ka ah Aqalka Sare ee Kenya horna u ahaan jiray Garyaqaanka Guud, mas’uuliyiin kale iyo Qareenno caalami ah oou dhashay Mareykan, UK iyo Faransiis.
Posted by Yusuf Garaad at 15:32:00